"क्रान्तिकारी काश्मिरी गर्ल " - Staronlinemedia.com
“क्रान्तिकारी काश्मिरी गर्ल “
February 16, 2019 | Gyanlama | 4:08 am
कास्मिर जो भारत सरकारले एकस्वतन्त्र सार्भभौमिक्ता सम्पन्न राज्य जबर्जस्ती हडपी बिलायको राज्य । काश्मिरी गर्ल त्याहांका एक आदिबासी भुमी पुत्र । उ बोल्दै गै । हामिले हाम्रो बिरासत कहिलै भुल्दैनौ । एउटै राज्यमा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्न सक्नु हामी श्रीनगर बासिको भाग्य भनौ या कर्मको फल । हामी स्वतन्त्र चाहान्छौ । हाम्रो आदिम भुगोलमा कसैको हस्तक्षेप स्विकार्ने छैनौ हामी। हामी मिहेनत गरेर एक छाक खाने हो हाम्रो भुगोल लडाइको ट्रेन्ज बनाउन पाइदैन । जो भारत सरकार पाकिस्तान विरुद्ध को कदम श्रीनगरमा उभियर रक्तपात मच्चाउन चाहान्छ जुन हामिलाइ स्वीकार्य छैन । कस्लाइ रहर हुन्छ र बारुदको धुवां संङ्ग उड्न र बम को गर्जन संङ्ग तैरिन ? गोलि निल्न र रगत ओकल्न कसैको रहर हुन्छ र??
” मनको सवालों हें , दिलकि गहिराइ परसे बेहद दर्द महशुस होगै । ” उ बोल्दा ओठ र नांक बाट सराबरी इको टोन निकालेर भ्वबेलहरु हिडन गरेर बोल्थो । ” जो मरे मर्न नहुने हरु मरे । तर बर्षौ देखि हामी मुश्लिम समुदाय र काश्मिरी हरु जिउदै मरिरहेको छु त्यां । एक श्वास मरेर फेर्छौ अर्को श्वास लिन बांच्नु जो छ । बाच्नुको नाममा मर्नु जस्तो कलंकित जिन्दगी अरु नहुने रहेछ । फेरि उ झोक्किदै थपियो ” जो बम ब्लास्ट होइ नं उ सरासरोके दिल्ली पर ब्लास्ट हुन चाहिए जब सबसे बडि हमारा लोक के कल्याणकारी भलाइसे उपर होगै यी काम । ” बट सडक पर होगै सैनिक आत्मी मृत्युं पर लोंडगैइ हामारा दिल पर दुख होइ,। ” उ जो मरे पनि दुख मान्दै थ्यो । उस्को मुहारमा दुख संङ्गै आक्रोश थ्यो ज्यादा !
हाल श्रीनगर मा बुबा ह्यान्डिक्राफ्ट पसल ममि पश्मिना बुन्ने फ्याक्ट्रीमा मजदुर बैनी र भाइ पड्दै । उ पश्मिना सप्लाइ गर्दै कहिले गोवा , ल्हदाक , दार्जेलिङ , सिक्किम र काठमान्डौ आइ पुग्दो रहेछ । उस्को आदिमिक्स काश्मिरी हिन्दी नेपाली लाई मैले बेलुका उस्को आदिम हिन्दी मिक्स लाई मैले बेलुका भरी सम्झे ।
साइकलमा कपडा बेच्ने बाबुको मात्र २१ वर्षको सामान्य मुसलमानको छोरा आदिल अहमद किन आफू चढेको कार सैनिक जवान चढेको बसमा ठोक्काएर मर्न- मार्न तयार भयो ? ऊ अर्को देशको नागरिक पनि होइन वरु श्रीनगरकै रैथाने नागरिक हो । आदिलहरू किन पटक पटक आफैंलाई उत्सर्ग गर्न तयार हुन्छन ? आदिलको यो उपक्रम कायरता हो कि महान वलिदान ? कुनै समयको स्वतन्त्र देशलाई फौजी वलले कव्जा गरेर शासन गर्नुको परिणाम भारतीय शासक वर्ग भोग्दै छ । देश लुटिएकाहरू सँधै अशान्त ह?ुन्छन । देश लुटिएका नागरिकहरू आत्मघात गर्न तयार हुन्छन हुन्छन। आदिल ! तिमीले संघर्षको जुन तरिका अपनायौ , त्यो तरिकासँग म सहमत छैन । तिम्रो तरिकाले राफेल घोटाला काण्डले वदनाम भएको भारतीय सरकारलाई उल्टै सहानुभूति मिल्ने निश्चित छ। यो तरिकाले अव तिम्रो माटोका हजारौं निर्दोष नागरिकहरू प्रायोजित आतङ्ककारी बन्ने र सत्ताको वर्वर आक्रमणको निशाना बन्ने पक्का छ । तिम्रो तरिकालाई विश्वभर आतङ्कवादी हमला भनेर दुत्कारिन्छ। तिमीले लड्ने तरिका वदल्नु पर्थ्यो ।